प्रदेश नम्बर ६ का कुन जिल्लामा कति प्रतिशत मतदान ?
समाचार प्रदेश नम्बर ६ का कुन जिल्लामा कति प्रतिशत मतदान ?
Ujyaalo सोमवार, मंसिर ११, २०७४ ०७:३९:००
काठमाडौं, मंसिर १० – आज सम्पन्न भएको प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभा चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा कम मत खसेपनि चुनावमा उत्साहजनक सहभागिता थियो । प्रदेश नम्बर ६ को कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा र जुम्लामा खसेको मतको प्रतिशत :
कालिकोटमा ६० प्रतिशत
प्रदेशनम्बर ६ को कालिकोटमा ६० प्रतिशत मत खसेको छ । ६४ हजार ९ सय ६१ मतदाता मध्ये झण्डै ६० प्रतिशतले मतदान गरेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्णमुरारी शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
जाजरकोटमा ७२ प्रतिशत मतदान भएको छ । ८३ हजार ९ सय ३७ मतदाता मध्ये झण्डै ७२ प्रतिशतले मतदान गरेका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । कतै कतै छिटपुट झडप बाहेक शान्तिपूर्ण ढंगबाट मतदान सम्पन्न भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हरिबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
डोल्पामा ७७ प्रतिशत
डोल्पामा झण्डै ७७ प्रतिशत मतदान भएको छ । कुल १८ हजार ७ सय ६८ मतदाता मध्ये १४ हजार ४ सय ३१ मतदाताले मतदान गरेका छन् । ६६ मतदान केन्द्र रहेको डोल्पाका ४४ वटा केन्द्रको मतपेटिका संकलन गरी सदरमुकाम ल्याएको र बाँकी तीन गाउँपालिकाको मतपेटिका भोलि या पर्सि मात्र हेलिकप्टरबाट संकलन गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमेश ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
हुम्लामा ६५ प्रतिशत
कम मतदाता रहेको हुम्लामा कमै प्रतिशत मत खसेको छ । कुल २७ हजार ४ सय ३५ मतदाता मध्ये ६५ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
जुम्लामा झण्डै ६९ प्रतिशत मतदान
जुम्लामा ६९ प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जुम्लामा टेलिफोन नलागेकाले यति नै मत खस्यो भन्ने एकिन नभएको जुम्लाका निर्वाचन अधिकारी खुमप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । जुम्लामा ५९ हजार ५९ मतदाता छन् ।